Apple waxay ku iibsatay qaybta modem-ka ee Intel $ 1.000 bilyan | Wararka IPhone
Apple waxay ku iibsaneysaa qeybta 'modem Intel' $ 1.000 bilyan
Muddo bilo ah ayaa la isla dhexmaraayay, toddobaadyadii ugu dambeeyayna warkiisa ayaa sii xoogeystay, laakiin ilaa daqiiqado yar ka hor maahan oo Apple ayaa xaqiijisay mid ka mid ah iibsigii ugu weynaa ee ay sameysay ilaa iyo haatan. Shirkadda Cupertino waxay la wareegtay qaybta modem ee Intel $ 1000 bilyan.
Iibsiga waxaa ku jira dhammaan shatiyadaha (qiyaastii 17.000) iyo injineerada qaybta Intel (qiyaastii 2.200) kuwaas oo ka mid noqon doona shaqaalaha Apple si ay uga shaqeeyaan shirkadda cusub ee ku wajahan moodelada mustaqbalka ku biiri doona iPhone-ka dhawr sano gudahood. La wareegistani maxay ka dhigan tahay? Waxaan kuugu sharaxeynaa hoosta.
Ku dhowaad qof walbaa wuu ogyahay iska horimaadka Apple ee Qualcomm, soo saare si toos ah u xakameynaya moodooyinka casriga ah. Iska horimaadkan ayaa sababay in sannadkan iPhone-ka uu yeesho modem Intel ah, oo ka liita waxqabadka kuwa Qualcomm sida ay sheegeen khubaradu. Dagaalkan u dhexeeya labadan tiknoolajiyadood ee casriga ah ayaa ku dhammaaday heshiis dhexmaray labada shirkadood oo u oggolaan doona iPhones inay qaadaan modemyada '5G' ee Qualcomm mustaqbalka dhow, laakiin Apple way iska fiirsatay mana oggolaan doonto inay tan oo kale dhacdo.
Shirkaddu waxay muddo dheer baraneysay sida loo sameeyo modemooyin u gaar ah. Tani waxay la macno noqon laheyd is dhexgalka qalabkaaga iyo softiweerkaaga, soo saarida astaamo cusub oo kaa reebi kara tartanka., iyo wixii ka sarreeya, kuma xirna wax soo saare kasta iyo shatiyadahooda. Laakiin tani maahan hawl fudud, waxayna ku qaadatay waqti badan, sidaa darteed Apple waxay go’aansatay inay qaado toobiye.
Iibsashada Intel (qaybinta moodeemka casriga ah) macnaheedu waa inaad si lama filaan ah u hesho rukhsad iyo shaqaale aqoon u leh oo kaa caawin kara si dhakhso leh u dedejinta habka naqshadeynta moodooyinkaaga cusub ee aan imaan doonin dhowr sano, qaarkood waxay ku qiyaasaan in aan shanta ka hor. Dhanka kale waxaad isticmaali kartaa modemka Qualcomm. Marka ay sameeyaan, waxay gacanta ku hayaan qaybaha ugu muhiimsan ee casriga ah: processor, naqshadeynta, modemka iyo jibroolada wireless-ka, waxayna ku howlan yihiin sidii ay u qaabeyn lahaayeen baytariyada iyo shaashadaha u gaarka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay ku iibsaneysaa qeybta 'modem Intel' $ 1.000 bilyan
IPhone XI, naqshad kale oo muran dhalisay oo ka timid shirkadda Cupertino
Sida loogu xiro PS4 ama Xbox One kantaroolaha iOS 13